नाति मेरै हो
अलकाआत्रेय चूडाल, (भिएना, अष्ट्रिया )
काठमाडौँको घट्टेकुलो । भुस्याहा कुकुरको जीउमा स्याउँ—स्याउँ परेका किर्ना जस्ता जोडिएका घरहरू, अटेसमटेस गर्दै को भन्दा को कमको प्रतिस्पर्धामा आकासिएका छन् । जेठको पट्यारिलो घाम । सानो गल्लीबाट पुगिने एउटा घरको भुइँतलाको कोठामा पचपन्न बर्षकी अधबैँसे महिला दुवै हात पछाडि बाँधेर झ्यालबाट बाहिर हेर्दै छिन् । ठूलो निधारमा सुहाउँदो ठूलो टीका, डम्म परेको जीऊलाई गुलाबी रङ्को सूती सारीले बेरेकी छन् । कानमा सुनका एकजोर रिङ् र नाकमा सुनकै ठूलो फुली लगाएकी छन् । घाँटीमा हरियो पोतेमा उनेको तिलहरी पनि सुहाएको छ । गम्भीर अनुहार भएकी विकासकी आमा हेर्दा सम्पन्न र सुखी परिवारकी जस्ती । तर अहिलेको उनको अनुहारले कुनै समस्या वा बन्धनबाट मुक्ति खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
पल्लो घरको ढुङ्गा छापिएको आँगनमा साना नानीहरू खेल्दै छन् । एउटाले सानो तीनपाङ्ग्रे रातो साइकल ठेल्दैछ, अर्को साइकलमा चढ्न पाएकोमा रमाएर हाँसिरहेको छ । हेर्दाहेर्दै विकासकी आमाका आँखा अगाडि आफ्नै नातीको अनुहार नाच्न थाल्यो । ...“मेरो नाति पनि कहिले हुर्केर यत्रो होला ....... यसैगरी साइकल चलाउला अनि म नजीकै बसेर त्यो रमाइलो दृश्य हेरुँला ।”..........
छोरोले बिहे भएको सात बर्षमा छोरा पायो । छोराको सन्तान होस् भनेर कति देउता भाकिन्, कति बर्त बसिन्, अनि बल्ल उनको सपना साकार भयो । भगवान्को आशीर्वादले बुहारीले पहिलो पल्टै नाति पाइदिई । नाति जन्मिएको खबर सुनेपछि खुट्टा भुइँमा थिएनन् उनका । विकासले एकाबिहानै फोन गरेर भनेको थियो, “आमा कविताले छोरा पाई ।” हर्षले उनको वाक्य बन्द भयो । बोल्दाबोल्दैको फोन लोग्नेलाई दिइन् । त्यो नाती हेर्न उडेर काठमाडौँ जाऊँ जस्तो लाग्यो । तर छोरा बुहारीले नबोलाई कसरी जाउन् ? हर्षले पहिलो पाइला उचालिएपनि दोस्रो पाइला जमीनमै गाडियो ।
बुहारी सुत्केरी भएको पन्ध्र्र दिन बितिसक्यो । गाउँका सबैले सोधिसके । जो भेटेपनि नाति हेर्न कहिले जाने भन्छन् । कतिको मुखमा बुजो लगाउन् । दुइ हफ्तापछिको शनिवार विकासले फेरि फोन गर्यो ।
“तेरो छारो कहिले हेर्नपाउँछौँ त विकास?”
“आमा, अहिले त कविताको दुई महिना छुट्टि छ । ऊ अफिस जान थालेपछि आउनुहोला नि हुन्न ?”
“हुन्छ बाबु तँ जे भन्छस् ”
बुहारी अफिस जानथालेपछि नजीकैको छिमेकीसँग साथ लागेर बिहान पाँच बजेको मकालु यातायातको बसमा काठमाडौ हिँडिन् । बसले विराटनगर छोडेपछि मात्र छर्लङ्ग उज्यालो भयो । महेन्द्रराजमार्गमा बस अविरल बगीरहन्थ्यो, विकासकी आमाको मनमा बगेको विगत जसरी । राजमार्ग छेउका खेतहरू हरियो तन्ना ओछ्याइएजस्ता थिए । खेल्दै गरेका साना केटाकेटीहरू खेल्न छाडेर गुडेको बसलाई ट्वाल्ट्वाल्ती हेर्थे । तिनलाई देखेपछि विकासकी आमालाई आफ्नो नातिको याद आउँथ्यो । कत्रो होला ? कस्तो होला ? उनको पहिलो नाति, साउँको भन्दा ब्याजको माया हुन्छ भन्थे बूढापाकाहरू । यो कुरा अहिले मात्र विकासकी आमालाई छर्लङ्ग भयो । नत्र किन उनको मन नातिको मायाले भुतुक्क हुन्थ्यो ।
काठमाडौँको चक्रपथबाट बस बिस्तारै दाहिने मोडियो र बिसौनीमा गएर रोकियो । विकासकी आमाका साथी कलङ्कीमै ओर्लिसकेका थिए । विकासकी आमा बसबाट ओर्लिएर अलमल्ल परेर यताउति हेर्दै थिइन् । टुप्लुक्क विकास आइपुगेर झोला खोसे । ट्याक्सी चढेर आमाछोरा घट्टेकुलाको डेरामा पुगे । बुहारी कविता सासूलाई ढोग्न तयार भइन् । शल हातमा समाएर सासूका खुट्टा ढोगिन् । निधारले सासूका गोडा छोएनन् बीचमा शलले छेक्यो । सासूका मुखबाट अनायास निस्क्यो, “सौभाग्यवती भव ।”
विकासकी आमाले पुग्नासाथ हतार–हतार ओछ्यानमा सुतेको नातिलाई छातीमा लगाइन् । कुलको शोभा बढाउने, मरेपछि बैतरणी तार्ने त्यो सानो काखभरिको बालखले अनजानमै बज्यैको मुखमा हेरेर मुसुक्क मुस्कुराइदियो । बज्यै नातीको मायाले भुतुक्क भइन् ।
“तँ जस्तै छ विकास तेरो छोरो पनि” दङ्ग परेर आमाले भनिन् ।
“हो र आमा ?”
“हो त नि । तेरो नाक पनि सानामा यस्तै थियो । घाममा धेरै सुताएर तँ पनि यस्तै कालो थिइस् । हात खुट्टा पनि सलक्क परेका तेरैजस्ता रैछन् ।”
विकासकी आमा नाति स्याहार्नमा मस्त भइन् । नाति हुर्कँदै गयो । उनी काठमाडौँ आएको पनि पाँच महिना नाघ्यो ।
हरेक शनिवार बुढाको फोन आउँछ । घर आइज अब नाति खेलाएर अघाइनस् भनेर बुढाले बोलाएको पनि धेरै भैसक्यो । होस् अब नातीको पास्नी सकेर आउँछु भनेर फोनमा कुरा भएपिच्छे टार्छिन् । जुराउँदा हेराउँदा बल्ल आठ महिनामा पास्नी हुनेभयो । पास्नीपछि नजीकैको डे केयरमा राख्ने भनेर कविताले कुरा पनि मिलाई सकिन् ।
कविता काठमाडौँको हुनेखानेकी छोरी । छोरोले मनपराइहाल्यो । नाइँ नास्ति गर्न भएन । सानो छँदासम्म खेल्न जाऊँ आमा ? अब सुतुँ आमा ? साथीले किताब मागेको छ, दिन हुन्छ आमा ? भनेर हरेक कुरा सोध्थ्यो । नसोधी केही गर्दैनथ्यो । अब ठूलो भएपछि बाआमाको मन राखिदिन एकपटक सोध्ने मर्यादा चाँहि राख्यो । शहरकी केटी । हाम्रो परिवारमा घुलमिल हुन नसक्ली । जात पनि त मिल्दैन नि बाबु भन्दा होइन आमा छेत्री बाहुन भनेको एउटै हो, केही हुन्न कविता असल छ भनेर उल्टै सम्झाउँथ्यो । छोरोको आग्रह टाल्न सकिनन् । घरमा बुढा कति दिन त रिसाएर भागै बसेनन् । विकासकी आमालाई कस्तो आपत । बुढाको मुख हेरुन् कि छोराको ।
झन् अहिलेको कुरा बुढाले सुनेभने के गर्लान् ? विकासकी आमाको मुटु काँप्यो । एकछिन अगाडि फाट्टफुट्ट देखिएका काला बादल जम्मा भएर पानी पार्न थाले । आकाश नराम्रोसँग मुटुनै कमाउने गरी गर्जदैँ छ । ठूलो प्रलय नै हुन लागेको जस्तो गर्दैछ । छड्के बाछिटा झ्यालबाट भित्र पस्यो । विकासकी आमाले हतार–हतार ग्रीलबाट हात छिराएर झ्याल तानिन् ।
“बादल गर्जँदा विकास साह्रै डराउँथ्यो । पानी पर्न थालेपछि जहाँ भएपनि दौडेर आउँथ्यो । पानी परेको दिन मसँगै सुत्थ्यो ।”......... विकासकी आमाका आँखा अगाडि पुराना दिनहरूले फर्किएर चियाए । ...........म सँधै आमासँग सुत्छु भनेर विकास झगडा गर्थ्यो । बिहा भएपछि त दुलहीसँग सुत्नुपर्छ भनेर बुवाले जिस्काउँदा म आमासँगै बिहा गर्छु नाइँ भनेर झनै आमासँग लिप्सिक्क टाँसिन पुग्थ्यो । ..........
पल्लो कोठामा खित्का छोडेर हाँसेको आवाज आयो । सानो नाति बेलाबेलामा रमाइला लीला गर्छ । रमाएर चारै हातखुट्टा फ्याँकेर बुरुक्क उफ्रन्छ । पल्लो कोठामा उसको मामाघरकी हजूरआमा, हजूरबुवा र मामा आएका छन् नातिलाई भात खुवाउन । घरकी बज्यैले त बिहानै पशुपतिमा लगेर ख्वाइसकिन् । अब अहिले मावलीको पालो । काठमाडौँको चलन कस्तो हँुदोरहेछ भनेर हेर्न उनलाई पनि मन थियो नि, तर के गर्नु ? उनी केही समयका लगि भएपनि कोठामा थुनिएकी छन् । बाहिरी संसारबाट टाढा । एक्लै । .........मन त लाग्छ कराएर छोरोलाई बोलाउँ कि भन्ने, तर फेरि डर पनि लाग्छ उसको पनि त कुनै बाध्यता होला । नत्र म बुढीलाई कोठामा थुनेको हेरेर ऊ किन बस्थ्यो र ? .......
हिजोआज सबैका हातमा फोन हुन्छ । बुहारीको पनि छ । केहिबेर अघि उसको मोबाइल बज्यो । उताबाट के भने कुन्नि उसले हस् मात्र भनेर राखिदिई । अनि मीठो स्वरमा “आमा पल्लो कोठामा जाउँ न” भनी । विकासकी आमा नाती बोकेर पल्लो कोठामा बुहारीको पछि–पछि गइन् । त्यहाँ पुगेपछि ए बाबुले सु गरेछ क्यार म सुराल फेराएर ल्याउँछु भनेर नाती लिएर बाहिर निस्की अनि बाहिरैबाट ढोकाको चुकुल पनि लगाइदिई । विकासकी आमा भित्र एक्लै परिन् ।
बुहारी कविताका माइती आएको यो तेस्रो पटक हो । तीनै पटक उनी कोठामा बन्दी बनाइएकी छिन् । कारण के होला जान्ने इच्छा उनलाई पनि छ । कवितासँग पनि यसको कारण जान्ने साहस गर्न सकेकी छैनन् । चित्त दुख्दो उत्तर आउला कि भन्ने डर छ । कहिलेकाहिँ छोरासँग केरकार गर्न पनि मन लाग्छ । तर उसलाई पनि के भन्नु ? थाहा पाएकै होला । बुहारीले चाहिँ मेरो मम्मीड्याडीले हजूरलाई र बुवालाई एकैपटक भेट्ने भन्सेको छ भनेर सान्त्वना पनि दिएकी थिई । उत्तरमा उनले केही पनि भनिन् । पोहोर हामी दुवै पनि त आएका थियौँ । वास्ता गरेनन् । .....तर पटक–पटक कोठामा बन्दी बनाइनुको उद्देश्य के होला ?
बादलको गडगडाहट अलिक कम भयो । हावा अघिजस्तै चल्दै छ । रोकिएको छैन । पानी बलेसीबाट चुहिन थाल्यो । धररर को आवाज विकासकी आमाको कानमा गुञ्जियो । झ्यालबाट बाहिर हेरिन् । अघिका साना नानी आँगनमा थिएनन् । उनीहरूको सानो साइकल पानीमा नुहाइरहेको थियो । परको पीपलको रुखका हाँगा कम्मर मर्काइ–मर्काई पानीमा भिज्दै नाच्दै थिए । बेला बेलामा बादल तबला बजाउँथ्यो ।
.........“जे सुकै होस् । बुहारी फरासिली छ । फुर्तिली छ । पढेलेखेकी छ । छोराबुहारी एक आपसमा सन्तुष्ट छन् । बाबुआमालाई चाहिने यत्ति त हो ।.......... काठमाडौँका ससुराली नभएको भए विकासलाई पनि यो बिरानो ठाउँमा बस्न गाह्रै पथ्र्यो । ......ठिकै छ । उसको अलग्गै संसार छ । .... विकास बेला बेलामा भन्छ “आमा म बाहिरै बसेर हजूरहरूको सेवा गर्छु ।” ....गरेकै पनि छ । बहिनीको बिहामा सुटुक्क पचास हजार पठाइदियो । आमा यो पैसा मैले दिएको भनेर कवितालाई थाहा दिनुहुन्न भनेको थियो । ........तर हाम्रो विकास पनि त कम छैन नि । नपाउनुको छ । एस.एल.सी.मा जिल्लैभरिबाट पहिलो भएको थियो । जागिर पनि राम्रै खाएको छ । कमाइ पनि राम्रै छ । आफ्नै कमाइबाट काठमाडौँमा घडेरी पनि किनिसक्यो । अनि अब छिट्टै घर पनि बनाउँछु भन्थ्यो । ......... रूप झनै राम्रो, कुनै राजकुमार भन्दा कम छैन । त्यस्तो छोरो पाउने कति भाग्यमानी तपाइँ त भनेर सबैले गाउँभरि मेरो डाहा गर्छन् । तर काठमाडौँका ससुरालीलाई त छोराको मात्रै मतलब हुँदो रहेछ । छोरो पाउने आमाको त कुनै सोधनी नै छैन । ..........विकासकी आमा पलङ्मा गएर बसिन् ।
........किन मलाई यहाँ थुनियो ? छोरा बुहारीको सल्लाह हो कि ? ....होइन विकासले मलाई थुन्ने सल्लाह कहिल्यै दिएन होला । जे जस्तो भए पनि म त्यसकी आमा हुँ । हुनसक्छ ऊ कुनै बाध्यताले यसको विरोध गर्न सक्दैन । ....... यो बुहारीका आमाबाबुुकै सल्लाह होला । नत्र उनीहरू फोन गरेर मात्रै किन आउँथे । तेरी सासूलाई पल्लो कोठामा पठा हामी आउँदै छौँ भन्छन् क्यारे ।........बुहारी त्यस्ती खराब छैन । ......म नराम्री भएर कवितेका बाबुआमालाई मेरी सासू भनेर चिनाउन लाज हुने भनेर त होइन ?”......
विकासकी आमा खाटबाट उठेर नजीकैको स्टीलको दराजको ऐना अगाडि उभिइन् । “मेरो अनुहार त्यति नराम्रो त छैन नि । अनुहारमा अलि अलि चाउरी परेछ ......त्यो त उमेर भएपछि परिहाल्छ................कपाल पनि कालै छ ......म धेरै गोरी नभएपनि काली पनि त छैन नि.......विकास पनि म जस्तै छ ........सबैले आमाजस्तो भएर छोरो राम्रो भएको पनि भन्थे .....विकासलाई ससुरालीमा पनि ज्वाइँमध्येको राम्रो भन्छन् भनेर कवितानै भन्थी ।..........तर किन मलाई यहाँ थुनियो ?........ मेरो सारी पनि त रामै्र छ नि ..............घर बस्दा यत्तिकै लुगा त लगाउँछन् नि काठमाडौँमा पनि । ..........गरीब भनेर हेपेका होलान् ............... म गरीब भएपनि मेरै छोरो नभई उनीहरूलाई भएन .....गरीब भएपनि मागेर खाएका छैनौँ......आफ्नै खेत छ ....शहरबाहिरै भएपनि विराटनगरबाट एक घण्टामा पुगिने ठाउँमा घर छ .....बारी छ ...... अब बर्खा लाग्यो । बिऊ राख्न हतार भैसक्यो । आफू यहाँ छु .........काठमाडाँैमा पनि चामल पठाउनुपर्छ .......यिनीहरूलाई चामल मात्रै किन्न नपरेपनि धेरै सजिलो हुन्छ । काठमाडौँमा यस्तो महँगी छ ।................त्यो नाति पनि त मेरै छोरोले त पाएको हो । उनीहरूकी छोरीले एक्लै पाएको होइन क्यारे .......... कविताका बाबुआमा कस्ता रहेछन् ? फोटोमा त देखेकै हो अगाडि हेर्न पाइएन । होस् तिनीहरूलाई किन हेर्नु पर्यो ........... ”
विकासकी आमाले उठेर ढोका तानिन् । ढोका बहिरबाटै लगाइएको थियो । बल गरेर तान्दा पनि खुलेन । ......उहिल्यै विकास बर्सिको हुँदा भित्र कोठामा छिरेर तलको छेस्किनी झारेछ । ढोका खुलेन । विकासले खोल्न जानेन । भित्र छोरो रुने बाहिर आमा । रुवाबासी भयो । पल्लो घरका भाइले बल्ल बल्ल झ्यालको ग्रील निकालेर भित्र पसेर ढोका खोले । त्यसबेला उनले सबै कोठाको ढोकाका तलका छेस्किनी कुच्याएर नलाग्ने बनाएकी थिइन् ।
उनी फर्केर पलङ्मै थचक्क बसिन् । साँझ पर्न लागिसक्यो । साँझ बत्ती बाल्ने बेला भयो कि भनेर भित्ताको घडी हेरिन् । भर्खरै पाँच मात्र बजेको रहेछ । जेठमा त सात नबजी घाम अस्ताउँदैनन् । पट्याएको सिरकमा टाउको अड्याएर पल्टिन् ।
विकासकी आमाका आँखा भित्तामा टाँगेको विकास र कविताको फोटोमा परे । ...... कति राम्रो जोडी । बुहारी विकासलाई माया गर्छे । ऊ भनेपछि भुतुक्क हुन्छे । छोरो पनि पाइहाली । ........ठिकै छ । हामी काठमाडौँ कहिले पो आइन्छ र ? .....उनीहरू पनि बर्षमा एक चोटि दशैँमा घर आउँछन् । ससुरालीमा टीका थाप्नुपर्छ भन्दै एकादशीमै हिँडि पनि हाल्छन् । हामी बुढा सासूससुरालाई पराइ देखेपनि छोरोलाई माया गरिहाल्छे । यो भन्दा बढी किन चाहियो ?
कति सुत्नु भन्ठानेर विकासकी आमा उठिन् । पल्लो घरबाट रेडियोमा गीत बजेको सुनियो । .....मै छोरी सुन्दरी कसरी भरूँ पानी.... .....
विकासकी आमालाई नाच्न खूब रहर लाग्छ । बर्ष दिनको तीजमा उनी खूब नाच्छिन् । उहिल्यै माइतमा उनका बाले नाचेको देखेछन् । अब छोरी बिग्री भनेर भाँडभैलो मच्चाएछन् । त्यो बेलादेखि नाच्न छोडेकी थिइन् । बिहा गरेपछि फेरि नाच्न थालिन् । उनकी सासूलाई नाचेको साह्रै मनपर्ने । त्यसैले आफू नजानेपनि बुहारीलाई नाच्न रोकावट भएन । अनि त के चाहियो ? विकासकी आमालाई सँधै तीजको प्रतीक्षा । नातिनातिनी भै सके तर नाच्ने रहर मरेको छैन । जेठा छोराको बिहामा रत्यौली नाच्ने कत्रो रहर थियो । तर पूरा भएन । विकास र कविताले सुटुक्क भागेर बिहा गरे । ............कुरा गम्दा–गम्दै विकासकी आमाका आँखा रसाए । फेरि खाटमा ढल्केकी थिइन् कतिबेला भुसुक्क निदाइछन् ।
“आमा बत्तीपनि नबाली किन अँध्यारोमा बस्नुभएको ?” विकास ढोका खोलेर भित्र
“पाहुना गए बाबु ?” खाटबाट जुरुक्क उठ्दै विकासकी आमाले भनिन् ।
“तिनीहरू त्यस्तै हुन् आमा । अलि मै हुँ भन्छन् । चित्त नदुखाउनुस् है ।”
विकासकी आमाको मुख के भन्न खोज्दै उघ्रिएको थियो कुन्नि ? छोराको मीठो अनुरोध सुनेपछि बीचैमा अड्कियो । आवाज आएन ।
उनलाई कतिबेलादेखि पिसाबले च्यापेको थियो, केही नभनी जुरुक्क उठेर हिँडिन् ।